Ikhamera ye-Oblique, Ikhamera yasemoyeni, ikhamera ye-Industrial Drone - Rainpoo
Uhlaka olugcwele lwekhamera ye-Drone/UAV etshekile yokwenza imephu
Ikhamera ye-oblique yohlaka olugcwele enokusabalalisa okuphansi okwengeziwe nokuhlanekezela okuphansi. Imodeli esungulwe ngedatha eqoqwe yi-DG4Pros inemiphumela yekhwalithi ephezulu kakhulu nokunemba okuphezulu kakhulu.
Ikhamera etshekile enephikseli ephezulu engabizi kakhulu
I-DG4M/DG6M iyikhamera etshekile engabizi kakhulu, enephikseli ephezulu, enozimele ogcwele ithuthukiswe yi-RainpooTech esekelwe ochungechungeni lwe-Pro olusezingeni eliphezulu. Ilungele i-UAS ye-rotor-wing/fixed-wing emakethe futhi ingathuthukisa kakhulu ukutholwa kwedatha ukusebenza kahle.
Ikhamera ye-photogrammetry yelensi eyodwa ephezulu
Inengqikithi yamaphikseli angu-100MP futhi ifakwe inzwa yesithombe yefomethi ephakathi, ingathola ikhwalithi yesithombe engcono nokuzwela okuphezulu. I-shutter ye-MS eyakhelwe ngaphakathi enesikhathi sempilo izikhathi ezingaphezu kuka-500,000.
Ikhamera yokubhala imephu enobuchwepheshe nokunemba okuphezulu
I-M6pros iwumkhiqizo onemisebenzi eminingi, efakwe ikhanda elizinzile le-triaxial elithuthukisiwe elingasetshenziswa kukho kokubili ukukhiqizwa kwesithombe se-Orthographic kanye ne-close-range photogrammetry ukuze udale ikhwalithi ephezulu namamodeli e-3D acwengisisiwe.
Njengenkampani ye-High-Tech, i-Rainpoo ibambelela kusiko lwe-geek futhi ibambelela kumgomo wokuqamba okusha okuqhubekayo.Sithemba ukuthi yonke imikhiqizo izosebenzela amakhasimende ethu kangcono futhi idale inani layo.
RIY amakhamera oblique Amakhamera welensi eyodwa ye-RIE Izesekeli
I-DG4M inguhlaka olugcwele olungabizi kakhulu, i-pixel ephezulu ebophezelekile...
I-DG6M ingabizi, iyiphikiseli ephezulu, enohlaka olugcwele...
210MP / uhlaka olugcwele / 960g / Ubuncane besikhathi sokuchayeka...
I-D2/D3——Indiza eyindilinga eyi-multi-rotor eyi-oblique c...
120MP/APS-C/850g/Ubuncane besikhathi sokuchayeka ≤1s/mu...
Ikhamera ye-orthometric photogrammetry yokonga, ...
Ikhamera yemephu yasemoyeni ye-Rainpoo M10 inesisindo esincane ...
I-M6 Pros iwumkhiqizo owenziwe ngezinto eziningi, ohlome nge-tr...
61MP/full-frame/330g/Ubuncane besikhathi sokuchayeka ≤0...
Ikhwalithi enhle Vala amasistimu wokuthwebula i-Range -...
I-D2pros, i-DG3pros, i-DG4pros
Amamodeli ekhamera asekelayo: Wonke Amakhamera ane-M600pro njenge-Mou...
Sizibophezele ekubeni abahlinzeki besixazululo abahamba phambili emhlabeni ekuqoqweni kwedatha ye-geospatial kanye nokufaka izicelo.
Umkhiqizi omkhulu wamakhamera e-oblique waseChina Yasungulwa ngo-2015, i-raipoo ibigxile...
I-optical lens eyakhelwe ngokuzimela.I-Double Gauβ eyakhelwe ngaphakathi kanye nokuhlakazeka okuphansi okwengeziwe ...
Ikhamera eyodwa, amalensi amahlanu. Lokhu kuhlanganiswa kukuvumela ukuthi uqoqe izithombe kusuka kuma-persp amahlanu...
Noma ngabe i-UAV enamarotha amaningi, i-drone ephiko elingashintshi, noma i-VTOL, amakhamera ethu angaba...
I-Rainpoo iqongelele inombolo enkulu yobuchwepheshe obuyinhloko emikhakheni ye-optics, ukuzulazula kwe-inertial, i-photogrammetry, kanye nokucubungula idatha yendawo.
Ithimba elilungisa iRainpoo libambe iqhaza emikhakheni eminingi emikhulu...
Khuluma Nezentengiso >
Uhlelo oluphelele lwangemva kokuthengisa luyisiqinisekiso somjikelezo womsebenzi womkhiqizo.
Gxila ku-Frontier futhi Uphishekele Ubuhle
Icala eliyimpumelelo lokuthwebula izithombe ezitshekile ——Sebenzisa imodeli ye-3D ukuze wenze inhlolovo ye-cadastral ezindaweni eziphakeme kakhulu 1...
Ngesethulo sokuthi Ubude obugxile buthinta kanjani imiphumela yemodeli ye-3D, ungaba ne...
I-D2+ DG3PROS| Iphrojekthi Edidiyelwe Yezindlu Ezihlangene Yamayunithi Amaningi
I-GSD nezinhlobo ze-drone yenkampani yenethiwekhi zikuthinta kanjani ukunemba okuhlobene kwemodeli ye-3D